बिस्तारवादी राजनीतिक उतारचढावका कारण विश्वमै १८ औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दायित्व पनि सिमित थियो ।
केही व्यक्तिलाई विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा असीमित अधिकारसहित गएकाले विद्यालय तहसनहस हुन थालेको र अझ खराब हुनेछ भन्ने लागेको छ । यसमा केहीमात्र सत्य छ । विद्यालय शिक्षामा केन्द्रीकृत सत्ताबाट केही वर्षमा भएको मुख्य परिणाम भनेको सार्वजनिक विद्यालयमा सर्वसाधारण जनताको भरोसा उठ्नु हो ।
स्थानीय निर्वाचन सकिएको १० महिना र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको करिब ४ महिनापछि निर्वाचन पराजयका विषयमा समीक्षा गर्न चैत ९ गतेदेखि वैशाख १६ गतेसम्म बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तीनै तहको निर्वाचन पराजयको विषयमा समीक्षा गर्न पूर्णरूपमा असफल भयो ।
मान्छे जुनसुकै पेसा–व्यवसायमा लागेको होस् या जुनसुकै क्षेत्रमा लागेर काम गरोस् । उसलाई मनको एक कुनामा रमाउने, हाँस्ने इच्छा रहिरहन्छ । मेडिकल डाक्टरहरू हरदम बिरामीको सेवामा खटिरहनुपर्ने अवस्थाबाट एकछिन भए पनि उन्मुक्ति लिएर मानवीय अनेक गुण र क्षेत्रका मान्छेसँग घुलमिल हुन, रमाउन चाहन्छन् ।
नेपालमा कुनै विषयमा छलफल या बहस हुँदा मूलत: दुइटा धारहरूको प्रधानता देखिन्छ । पहिलो, कुनै व्यक्ति र विषयलाई अति राम्रो भनेर हाँमाहाँ मिलाउने अनि अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने । दोस्रो चाहिँ राम्रै हुनुका बाबजुद विरोधै गर्ने । अर्थात् अति राम्रो भनेर देवत्वकरण र नराम्रो भनेर दानवीकरण गर्ने ।
पुराना नेताको नयाँ वाचा
मलेसियाको राजनीतिमा भइरहेको हलचल निकै रोचक र अपत्यारिलो छ । राजनीतिबाट अवकाश लिइसकेका एक ९२ वर्षीय निरंकुश राजनेताले पुन: चुनावी मैदानमा प्रवेश गरी, आफैंले बनाएको भ्रष्ट उत्तराधिकारीलाई हराएर फेरि सत्तासिन भएका छन् ।
डा. भगवान कोइराला, डा. अनुप सुवेदी
नेपालीको जनजीविका, आम्दानी र रोजगारीको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र हो । यसको रूपान्तरण नगरी देशको समृद्धिको यात्रा तय हुन सक्दैन । हाम्रा लागि कृषि सपार्ने भनेको खानेकुरा, रोजगारी र आम्दानी बढाउने मात्र हैन, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र राष्ट्रियताको पनि सवाल हो । अहिले सरकारको बोलीमा कृषि प्राथमिक क्षेत्र बनेको छ ।
बलात्कृतलाई सामाजिक न्याय
सधैं एउटै बाटोमा हिँडिरहनु कसैका लागि पनि सुखद हुँदैन । त्यसैले मानिस नयाँ–नयाँ बाटोमा हिँडिरहन चाहन्छ । पढ्ने, बोल्ने वा लेख्ने कुरा पनि त्यही हो । तर हामी बाँचिरहेको समाजले हामीमध्ये धेरैलाई त्यही विषय सयौंपटक दोहोर्‍याएर लेख्न, बोल्न बाध्य पारिरहन्छ ।
प्रदेश ५ को समृद्धिका आधार
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तह निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकारहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तर संघीयताका आधारको रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा संघको सहयोग पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको आभाष भएको छ ।